Wafdi ka socda UK oo Muuse Biixi kala hadlay Colaadda Tukaraq
By Wariyaha Hargaysa , GAROWE ONLINE
HARGEYSA, Somaliland - Safiirka dowladda Ingiriiska ee u fadhiya Soomaaliya, David Concar oo socdaal ku tagay Axadii shalay magaalada Hargeysa, ee xarunta maamulka Somaliland.
Waxaa madaxtooyadda Somaliland kusoo dhaweeyay, oo wadahadal kula qaatey Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, oo ay kawada hadleen arrimo dhowr ah, oo ay kamid ahaayeen colaadda gobolka Sool iyo wadahalada Soomaaliya iyo Somaliland.
Wadahadalada dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Somaliland, ayaa hakad galay wixii ka dambeeyay doorashadii Farmaajo, iyadoo dedaallo dhawaan la sameeyay ay fashiliyeen colaadda Tukaraq iyo heshiiskii saddex geesoodka Dekada Berbera.
Beesha caalamka iyo dowladda Federaalka ayaa ugu baaqay Somaliland iyo Puntland inay xabad-joojin ka sameeyay Tukaraq, islamarkaana ay wadahadal ku soo afjaraan khilaafka u dhaxeeya.
Xiisadda Tukaraq ayaa billaabatey markii Somaliland xoog kula wareegtay degaanka bishii January ee sanadkan, waxaana labada maamul ku dhexmaray halkaasi dagaallo dad badan ay ku dhinteen.
War-qoraal ah oo kasoo baxay Madaxtooyadda Somaliland, ayaa lagu sheegay in Muuse Biixi Cabdi iyo Safiirka UK ay sodoo kale isla soo qaadeen arrimaha doorashada Baarlamaaniga maamulka Muuse Biixi ee sanadkan horaanta 2019-ka.
Somaliland ayaa sheegtay inay ka go'day dalka Soomaaliya intiisa kale sanadkii 18-kii May, sanadkii 1991-dii, balse, tan iyo xilligaas ma aysan helin wax aqoonsi caalami ah.
Kulanka Safiirka Ingiriiska la qaatay Madaxweyne Muuse Biixi ayaa qeyb ka ah dadaalo caalami ah ay wadaan saaxiibadda Soomaaliya, kuwaasoo dhamaantooda Bud-dhig u yahay sidii dib leyskugu soo hor-fariisin lahaa dhinacyadda.
Safarka Haysom ayaa qeyb ka ah socdaal uu ku marayo maamul goboleedyada...
Biixi oo Beesha Caalamka "u caddeeyay" mowqifkiisa doorashadda
Somaliland 19.12.2019. 13:26
Somaliland oo Xabsi sanado ah ku riday Naciima Abwaan Qorane
Somaliland 15.04.2018. 11:25
Turkiga oo Muuse Biixi kala hadlay dib u billaabidda wada-xaajoodka Villa Somalia
Somaliland 10.01.2019. 23:13
Somaliland 22.11.2018. 22:45